Degdeg;- Nabadoonkii beesha Gaaljecel oo hadda lagu dilay bartamaha Kismaayo. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeSoomaliyaDegdeg;- Nabadoonkii beesha Gaaljecel oo hadda lagu dilay bartamaha Kismaayo.
Nabadoon Rashiid oo ahaa Nabadoonka Beesha Gaaljecel ayaa hadda lagu dilay kismaayo, Waxaa la iisheegay inuu kamid
ahaa Odayaashii dhaqanka ee la dudsiiyay Mataladooda oo lagu badalay shaqsi kale.
Dilka nabadoonka waxaa marqaannews u xaqiijiyay siyaasiyiin kasoo jeeda kismaayo oo isha ku haya dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee kasocda kismaayo gaar ahaan arimaha cakiran ee doorashooyinka.
Faahfaahinta dilka gowrdhaw filo.